समानान्तर Samanantar: धत्तेरिका ! कस्तो खल्लो कार्यक्रम
बीपी कोइराला भारत-नेपाल प्रतिष्ठान र भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको सांगीतिक कार्यकम (शनिबार साँझ) जमेन । विश्वजित भट्टाचार्य नाम गरेका सज्जनले लगातार १ घन्टा गी गाउने र बाच्छै बाजा पनि बेलाबेला बजाउने गरेका थिए । उनको जाँगर र गाइरहने शक्ति गज्जबकै लाग्यो । उनले हिन्दी फिल्मका कालजयी गीतहरू गाएका थिए । हेमन्तकुमार, मुकेश, रफी, मन्नाडे, किशोरकुमार आदिले गाएका गीत सुनाएका थिए तर मिठास थिएन । कलाकारको अपमान नठानियोस् । नेपाली श्रोतालाई गीत सुनाएकोमा धन्यवाद ।
कार्यक्रम आयोजना पनि उम्दा रहेन । भारतीय दूतावासको कार्यक्रम सधैँजस्तो केही ढिलो सुरू भयो । राजदूत राकेश सुदले बत्ती बालेर उद्घाटन गरे । कुनै नेपाली कलाकारलाई नै उद्घाटन गराएको भए उत्तम हुने थियो नि । उद्घोषकले सुदको चाकरी गरेर सुन्दा लाजै लाग्यो । यी सुद महाशयलाई उद्घाटन गर्ने कस्तो रहर हो?
सँगैको सिटमा संयोगले दुई अधवैंसे महिला बस्न आइपुगे । एउटी विदेशी र अर्की नेपाली । कार्यक्रमभर तिनको खासखुस र हाँसोले दिक्कै बनायो । त्यसमा पनि ती नेपाली महिला कति बोल्न सकेकी ? कस्ता सउर नभएकाहरू । अरूलाई अप्ठेरो होला भन्ने अतिकति त ख्याल राख्नुपर्छ !
यो कार्यकम विश्वजितलाई नेपाल घुमाउन आयोजना गरिएको हो कि जस्तो लाग्यो । सानो कोठामा १०-२० जना बसेर खानपिनसँगै यसरी गीत सुन्दा त आनन्द हुन्छ होला तर यति ठूलो श्रोताका जुटाएर प्रस्तुत गर्न मिल्ने कार्यक्रम थिएन ।
बीपी प्रतिष्ठानमा पैसा पनि उनैले राखेका छन्, कार्यक्रम पनि उनैले बनाउँछन् क्यारे र केही नेपाली पनि छन् क्यारे साक्षी बस्नका लागि । विश्वजितभन्दा मीठो हिन्दी सिनेमाका गीत गाउने नेपाली कलाकारै कति होलान् ? भारतको त कुरै भएन । पहिले पहिले भारतीय लोकसंगीत वा शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत गर्थे । धेरैजसो कार्यक्रममा आनन्द आएको थियो ।
नेपाली सेनाको प्रेक्षालय भने उम्दा रहेछ ।
Posted by govinda adhikari at 8/22/2010 06:46:00 AM
Labels: नेपाल भारत बीपी प्रतिष्ठान